Uganda oo ciidamo usoo dirtay Somalia una soo sheegtay in aysan ka horeyn Cunto iyo raaxeysi ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Uganda oo ciidamo usoo dirtay Somalia una soo sheegtay in aysan ka...
Uganda oo ciidamo usoo dirtay Somalia una soo sheegtay in aysan ka horeyn Cunto iyo raaxeysi
Ciidamo gaaraya 1,800 askari oo ka socda dalka Uganda ayaa ka soo degtay Magaalada Muqdisho, iyadoona ay ciidamadan si toos ah ugu biirayaan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Taliyaha Ciiddanka Dhulka ee dalka Uganda, Jeneral David Muhoozi ayaa arinkaasi ku dhaqaaqay Munasaabad lagu qabtay Xraunta Tababarka ee Taageeradda Hawlgalladda Nabadda ee SINGO oo ku taalla Degmadda Nakeseke ee dalkaasi.
“Hawlgalka Somalia ma aha mid Jimcsi iyo Raaxaysi, waa xaallad dagaal” ayuu yiri Taliyaha Ciiddanka Dhulka ee dalka Uganda oo kula dardarmay ciiddanka inay la yimaadaan Dishibiliin iyo inay feejignaan dheeraad ah muujiyaan.
Waxaa uu ciidamadaas ka codsaday in ay iska ilaaliyaan dhaqan xumada iyo in laga faafiyo wararka been abuurka ah.
“ howlgalka Soomaaliya maaha Sab, ama meel cunto ee waa meel dagaal, waa in Askari kasta eegaa Askariga kale gadaashiisa, hubisaanna in aad u hoggaansameysaan xeerarka dagaalka iyo howlgallada ” ayuu sii raaciyey Taliye Ciidanka, Gen. Muhoozi.
Waxaa kale oo uu Taliyuhu sheegay in howlgalka Soomaaliya oo Afrika lama filaan ka ahaa ay Ciidanka difaaca Uganda ee UPDF ay ka dhigeen mid suuragal ah.
Dhinaca kale, Ciiddanka cusub ee Uganda ee soo gaaray Soomaaliya waxaa Taliye u ah Kolonel Kosiya Kuteesa, waxaana Ku-xigeenka u noqon doona Kolonel Rogeris Okiror.
Gen Peter Elwelu , oo ah Taliyaha Ciidanka Lugta ee Uganda ayaa ka mid ahaa saraakiishii sagootisay Ciidanka loo soo diray Soomaaliya waxaana uu u rajeeyay in ay guul ku dhameystaan.
Ciidamadaan ayaa kamid noqon doono 6,000 Askari ee Uganda ku matala Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya, waxyana soo qaateen tababar Lix bilood ah oo la xiriiray sida looga howlgalo goobaha dagaallada .
Previous articleGanacsi ay lahaayeen Somali oo maanta lagu kala boobay Cape Town
Next articleMiliteriga Suudaan oo ku dhawaaqay xukuumad KMG ah ilaa labo sano